शनिबारको दिन झुक्किएर पनि नखानुहोस् यी चिजहरु ! «
शनिबारको दिन झुक्किएर पनि नखानुहोस् यी चिजहरु !
शनि देवलाई एक न्यायप्रेमी भगवानको रुपमा मान्ने गरिन्छ। शनिदेवले कुनै पनि व्यक्तिको कर्म अनुसारको फल दिने गर्नुभएको छ। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिले खराब काम गरेको खण्डमा ठूलो नोक्सान बेहोर्न पर्ने र जीवनमा सफलता हँसिल गर्न नसक्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै शनिवारको दिन खानेकुरामा ध्यान नदिँदा समेत शनि देव रुष्ट हुने विश्वास समेत रहेको छ। शास्त्रमा उल्ल्लेख गरिए अनुसार शनिबारको दिन माछा ,मासु तथा अन्य मंशहारी भोजन गर्दा शनि ग्रहको नकारात्मक असर पर्ने गर्छ। त्यसैले आज हामी तपाईहरुलाई यस्ता केही चिजहरुको बारेमा बताउन जाँदै छौँ जुन तपाईले शनिवारको दिन खाँदा जीवनमा ठूलो असर पर्ने गर्छ।